Izindaba - Ukulungiswa kwama-slide strains ukuthola imvubelo
Ukulungiswa kwama-slide strains ukuthola imvubelo
Beka ucezu lwephepha lokuhlunga eliyindilinga phansi kwe- isidlo se-petri, ubeke induku yengilazi emise okwe-U, bese ubeka amabili ahlanzekile amaslayidi engilazi endukwini yengilazi.
Ngemuva kokuvala inzalo, engeza ama-milliliters ambalwa esisombululo se-oyela esivunyelwe u-20% ephepheni lokuhlunga ngendlela ye-aseptic. Umsebenzi wawo omkhulu ukugcina iphepha lokuhlunga limanzi ngesikhathi senqubo yesiko.
Usebenzisa iPasteur pipette, engeza imvubelo encibilikisiwe ukhiphe i-agar noma i-potato dextrose agar ebusweni besilayidi sengilazi ukuze wakhe ungqimba oluncane lwe-agar medium.
Sebenzisa i ilokhi engangenisi ukusakaza imvubelo ukuze ihlolwe kusilayidi sengilazi, ukumboza ingxenye yesikhungo samasiko ngengilazi lekhava oyinyumba, ukumboza isitsha se-petri bese usibeka ku-25 ° C izinsuku ezingaphezu kwezingu-7.
Sebenzisa isibonakhulu sokuqhathanisa isigaba ukubona ukukhula kwamagciwane esigabeni sokukhula, bese uqhathanisa ukukhula kwamagciwane avezwe emoyeni nangaphansi kwengilazi lekhava. Futhi ungasusa ngobumnene ifayela le-ingilazi yokumboza kusuka kusilayidi sengilazi, lahla ithonsi le-lactophenol, i-lactophenol-picric acid noma i-lactophenol ukotini oluhlaza okwesibhakabhaka ukulungisa amabhaktheriya, bese umboza ingilazi yokumboza ngophalafini, i-nail polish noma izimpawu ezikhethekile zokunamathela.
1. Sula isilayidi nesivalo sengilazi.
2. Beka ithonsi lamanzi maphakathi nesilayidi sengilazi.
3. Sebenzisa inaliti yokuhlinza ukuze uthathe ama-hyphae ambalwa.
4. Faka isicelo sokusula amaconsi amanzi.
5. Mboza ngengilazi yokumboza.
6. Ukudaya kudinga ukwenziwa, futhi kungabonakala ngaphandle kokudaya.
Njenge isidlo se-petri,amaslayidi engilazi, ukufaka i-loop ingilazi yokumboza umkhiqizi nomhlinzeki wemishini yezokwelapha nemishini, uHuida akakwazi ukunikeza amakhasimende kuphela izixazululo eziphelele zemishini yaselebhu, kodwa futhi anganikeza uhla oluphelele lwemikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nezinsizakalo ezihlobene zama-labwares waselebhu. Siyakwamukela ukuthumela uphenyo ukuthola eminye imininingwane.